विवेकको जिज्ञासा | Nagarik News - Nepal Republic Media
३ फाल्गुन २०७६ ३ मिनेट पाठ
– बाबू, जुत्ता लगाएर भित्र जानु हुन्न। बाहिरै खोल है ।
– आमा यहाँभित्र जाँदा किन जुत्ता लगाउनु हुन्न ?
– यो मन्दिर हो नि। मन्दिरभित्र कहिल्यै जुत्ता लगाएर जानु हुन्न नि।
– मन्दिर भनेको के हो र आमा ?
– मन्दिर भनेको भगवान् बस्ने घर हो बाबू ।
– आहा, भगवान्को घरमा कति धेरै मानिस आएका। भगवान्सँग खेल्नु हुन्छ आमा ?
– हुँदैन ।
– जुत्ता पनि लगाउन नहुने, नखेल्ने पनि, मलाई त यस्तो भगवान् मन पर्दैन ।
– छोरा, भगवान्लाई त्यसो नभन, पाप लाग्छ ।
– पाप लाग्दा के हुन्छ आमा ?
– पाप लाग्दा दुःख हुन्छ, हानि हुन्छ। त्यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन बाबू। पहिले जुत्ता खोलेर भित्र भगवान्लाई पूजा गर्न जाऊँ, हिँड। पूजा गरेर बाहिर आएपछि कुरा गरौंला नि।
सुशीलाले ५ बर्से छोरो विवेकलाई फकाइन्। त्यसपछि उसले मन नलाईनलाई जुत्ता खोल्यो र आमाको पछिपछि मन्दिरभित्र पस्यो। पूजा सकेर मन्दिर बाहिर निस्किए। सुशीलासँग छोराको प्रश्नको जवाफ थिएन। त्यसैले छोरालाई केही किनेर अलमल्याउन खोजिन्। विवेक सामानमा नलोभिई आफ्नो जिज्ञासाको पछि लाग्यो। अब भने छोरालाई कसरी सम्झाउने भनेर सुशीलालाई आपत् पर्‍यो। मन्दिरबाट बाहिर निस्कदा उनले छिमेक घरकी छोरी रूपालाई देखिन्। रूपा दिदी भन्दै विवेक उनीसँग झ्यामिन्छ। त्यसैले आमालाई तान्दै उनी छेवैमा गयो र उसैले सोध्यो, ‘दिदी, मन्दिरभित्र जुत्ता लगाएर जानु हुँदैन रे हो ?’
सुशीलाले मन्दिरमा छोरासित भएको सबै कुरा सुनाइन्। रूपाले सुशीला र विवेकका कुरा सुनिन्। एकछिनपछि रूपाले मायालु स्वरमा भनिन्, ‘बाबू, हामी जुत्ता लगाएर चारैतिर हिँड्छौं र फोहोर टेक्छौं, हैन त !’
जिज्ञासु विवेकले मुन्टो हल्ल्याउँदै भन्यो, ‘हो नि दिदी ।’
विवेकको मनोभाव बुझ्दै रूपाले भनिन् ‘हो, त्यसो हो भने जुत्तामा किटाणुहरू टाँसिन्छन्। ती किटाणु रोग सार्ने किटाणु हुन्। रोग लाग्यो भने नराम्रो हुन्छ, दुख हुन्छ । रोग लाग्दा कसैलाई पनि फाइदा हुन्न। हैन त ?’
विवेकले खुसी हुँदै भन्यो, ‘हजुर, हो नि दिदी ।
– बाहिर हिँड्दा लगाएको जुत्ता त घरभित्र पनि लानु राम्रो होइन। मेरो घरभित्र पनि जुत्ता खोलेर मात्र जान्छौं नि, हैन त। त्यस्तै मन्दिरभित्र जाँदा पनि जुत्ता लगाउनु हुँदैन। बुझ्यौैं नि विवेक !
– बुझे रूपा दिदी ।
विवेक खुसी भयो। सुशीला पनि ढुक्क भइन्। त्यसपछि आमाछोरा रमाउँदै घर आए।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७६ ०९:०९ शनिबार